Warqad furan oo ku socota Madaxweyne Somalia Xasan Sh. Maxamuud – SBC
Warqad furan oo ku socota Madaxweyne Somalia Xasan Sh. Maxamuud
Posted by editor on Noofember 20, 2012 Comments
Mudane madaxweyne marka hore waxaan kugusalaamayaa salaanta islaamka salaama caleykum waraxmatulaahi wabarakaatu, marka xiga waxaan kuu rajaynayaa guul iyo in ilaahey kuu fududeeyo xilka adag ee laguu igmaday. Intaas kadib Mudane madaxweyne waxaan kamid ahay kumanaanka qurbe joogta ah ku waasoo ay wajiyadooda kamuuqatay ayaamahan danbe farxad iyo hididiilo iyagoo han weyn u qaba inay u dhalatay dowlad dhab ah, oo lagu soo doortay si xalaal ah, anigoo halkaas kaduulaya ayaan waxaan kaloo dhagaystay warbixintaadii ugu danbeysay oo aad soo bandhigaysay wixii qabsoomay iyo waxa ay dowladu hiigsanayso inay suurto galiso waa hadii rabi idmee.
Aad ayaan ugu faraxsanaha talaabooyinka ilaa hada laqaaday oo aykamid yihiin in ladhiso dowlad kooban oo lala xisaabtami doono,in lala dagaalo musuqmaasuqa ,iyo in lakobcin doono dhaqaalaha wadanka. Shaki kuma jiro inay talaabooyinkaasi yihiin talaabooyin aad u muhiim ah waana soo dhawaeynayaa ,waxaan rabaa inaan wax yar katilmaamo midkamida talaabooyinka dowladu qaaday oo ah miisaaniyad usamaynta dalka 3da bilood.ee sanadka kadhiman.
24kii bishii oktoober.ayay baarlamaanka uu gudoomineyey mudane profsor jawaari ansixiyey miisaaniyeda dhaqaale ee 3da bilood ee sanadka kadhiman miisaaniyaadaas oo lagu qayaasay $16 milyan oo loogu talagalay in dalka wax loogu qabto 3da bilood ee sanadka kadhiman. Aan u dhaadhaco muhiimada qoraalka dhanka kale markaan fiirino dhaqaalaha wadankeena kabaxa oo looqaato qaad ayaa wuxuu 10 laab kabadanyahay miisaaniyada dowlada.
Bal ila eeg qarashka uga baxa Soomaaliya ee Kenya ku dhaca Aan ka soo qaado xasuusin yar, qarashka ka soo baxa qaadka nuuca loo yaqaan miirow ga waxa uu si toos ah ugu xaroodaa dalka Kenya, wasaarada Beeraha Kenya waxa ay cadaysay in wax-soo-saarka ugu badan ee dhinaca Beeraha uu ka soo galo qaadka Mirrowga. 2011 waxaa la diyaariyay Warbixin lamagac baxday Untold Stories waxaana laga diyaariyay qaadka loo yaqaan Mirrowga cadadka loo kala dhofiyaa waa sidaan:-
16 TON! Garoonka loo yaqaan Wilson Airport iyo 4 Ton oo laga dhoofiyo Jomo Kenyata. 20-kaan Ton iyo kabadan oo si qal-qalooc ah lagu dhoofiyo waxay Aadaan Somalia, qarashka maalin kasta Soomaaliya ka Aada Kenya waxay warbixintu ku sheegaysaa 30 Million oo Kenya money ah oo u dhiganta qiyaas ahaan $315,000 Doolar maalin kasta oo noqonaysa Bishii $9.450.000/Month (Sagaal Malyan Afar Boqol iyo Konton Kun oo Doolar) bil kasta! Sanadkii ma is weydiisay? Waa $113.400.000! Hadaba markaan Sanakiiba $113.400.000 aan siino Kenya aanan ku badalano Caafimaad daro, Mustaqabal La,aan iyo dhalinyaradii wadanka usoo koraysay oo lacuryaamiyo,iyadoo loo adeegsanayo qaadka, Mudane Madaxweyne miyaan la oran Karin waa gumeysi casri ah oo u baahan in loo istaago lagana hortago si loo badbaadiyo aayaha ummada soomaaliyeed.
Mudane madaxweyne anigoon doonayn inaan waranka kugu gilgilo,dareensana in howlo badani kuhor yaalaan ogna inaad hogaaminaysid ummad qalafsan oo ay iska jiraan caqabado badan oo kaa hor imaan kara, aan kuxasuusiyo dhaartii aad ku dhaaratay inaad u adeegaysid ummada Soomaaliyeed kana talinaysid DANTA DADKA IYO DALKA SOOMAALIYEED. Mudane madaxweyne waxaan kaloo kuxasuusinayaa in laguu hanweyn yahay ,waxaa kaloo xusid mudan in madaxweyne hore oo wadanka kasoo taliyey Alle ha u naxariistee Maxamed siyaad bare uu garoowsaday dhibaatadaas kuna dhiiraday inuu wax ka qabto.
Dhibaatada qaadka oo oo la orankaro halka ay manta marayso 100 laab ayay kayareyd markaas ,dhanka kalena way jiraan madaxweynayaal ku dhiciwaayey oo indhaha iyo dhagaha kadabooshay TAAHA,IYO OOHINTA, kayeeraysa gayiga soomaaliyeed iyagoo diidaya inay iska hor yimaadaan ama ay ka xanaajiyaan dowladaha Qaadka keensada wadanka waxaana kamid ahaa Madaxweyne shariif, waxaan kaloo meesha kamaqnayn madaxweynayaasha Puntland iyo Soomaliland oo arintaas si weyn uga gaabsaday iyagoo kaxishoonaya ama kabaqaya dowladaha Itoobiya iyo Kenya oo aan marnaba raali ka ahayn in lasoo hadal qaado ganacsigooda koowaad kaasoo usoo xareeya Sanadkii Bilions doolarka Maraykanka ah.
Dowlada dariska ah ayaa waxay kaloo doonayaan inay kahortagaan inay Soomaaliya usoo kacaan dhalinyaro xayi ah oo miyir qabta oo waxbaratay oo boqolka sanoo soosocota latartami kara wadankooda ,si ay dowladaha dariska ahi arintaas uga hortagaana waxay adeegsadaan qaadka in lagu curyaamiyo dhalinta Soomaaliyeed.laguna qaato dhaqaalaha wadanka.
Ugu danbeyntii Mudane madaxweyne waxaan kuu rajaynayaa in ilaahey kuu fududeeyo xilkaas aad qaaday,oo aad kudhaaratay inaad kashaqayn doontid danta dadka iyo dalka. Waxaan kaloo ilaahey kaaga baryayaa inuu kusiiyo karti buuxda oo aad kudhiirato go’aan adagna kaqaadato ,haday dacar kaqaraartahayna aad fool kafool u wajahdo dhibaatadaas Qaadka. Waxaa iga xasuusina qaadashada go’aanada ad-adag waa calaamadaha lagu yaqaan hogaamiyayaasha dhabta ah. Guuleyso’ Wa bilaahi towfiiq.
Noofember 20, 2012 at 3:26 pm
Masnshalaah Abukar Cawaale,waa Qoraal Qiima badan xambaarsana danta dalka iyo dadka. Waxaan rajaynayaa inay madaxdu qoraalkaaga iyo halganka aad mudada dheer kusoo jirtay ay tixgaliso,guuleyso geesi soomaaliyeed.
Noofember 20, 2012 at 11:56 pm
Sxb aad iyo aad ayaad umahadsantahay waxaana warbaahinta soomaaliyeed ee sbc international kacodsanaynaa inaay barnaamijyo dhaxal gala ay kadiyaariso waad mahadsantihiin mar 2aad iyo mar 3aadba
Noofember 21, 2012 at 4:46 pm
Waxaan marka hore salaamayaa dhamaan bahda ALL SBC & Akhristayaashiisa sln kdb.
Waxaan si aad ah usoo dhawaynayaa fikirka wanaagsan ee walaalkeen, waana uga mahadcelinayaa waxaana leeyahay ILAAHAY hakuu rumeeyo fikirkaan wanaagsan,Waa mid loo baahan yahay waana dhibaato aan loo dulqaadan karin oo loo gaysanayo umadda Soomaaliyeed, iyadoo dhaqaale, caafimaad, amni & akhlaaq ahaanba lugu dilay mushtamaca Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan.
Waxaan mar kale leeyahay walaalkay Abuukar Jazaakalaahu Ilaahayna cilmigaaga, caqligaaga & fikirkaaga wanaagsanba hakuu siyaadiyo oo hakuu barakeeyo. Umadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay Ilaahay dantiina ha idin tuso. waxaana hubaa in hadii ay dawladu tilaabadaan qaado ay si deg deg ah u guulaysanayso, dhaqaalaha dibada laga raadshana uu halkaan ka imaan lahaa, xitaa sugidda amaanka waxaan qabaa in joojintiisu ay kaalin wayn ka qaadan lahayd.
Janaayo 24, 2013 at 11:23 am
Marka hore waxan salamya dhaman bahda saxafada ,cidii kadhiibatay ra’yi figirkan wanagsan waana mid aan dhinacayka aad uka soo daweynayo madama ay tahay mid dhabar go’ ku ah umadeena dhinac kasta ayna tahay in laka qaado talaabo sharci leh waxan karajaynaya madaxweynaha iyo xukuumadiisa in ay wax kaqabtaan….